Teknolojiyaddu waxay noo horseedaysaa inaan ku rinjiyo adduunyada dalwaddii ee VR | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqda dhabta ah ayaa ah sawir kale oo adduun kale ah midka aan haysanno sida xaqiiqda la kordhiyay uu sameynayo. Farqiga u dhexeeya labada ayaa hoos u dhigaya xaqiiqda ah in qofku abuuro adduun cusub, kan la kordhiyayna wuxuu soo bandhigayaa xaqiiqo la beddelay iyada oo loo marayo aalado taxane ah sida taleefannada casriga ah ama kuwa la gashado.
Laga soo bilaabo GIF firfircoon waxaan awood u yeelannay inaan ka fekerno halka aan ku soconno xaqiiqda dhabta ah. Aynu nidhaahno waad xirtay xoogaa muraayadaha VR-ka ah si lama filaan ah xarafkii aad gacmahaaga ku rinjiyeysay ayaa ka muuqda qolkaaga in kasta oo aan lagu buufin buufin "dhab ah", laakiin waa kuwa ay softiweerku ku siinayaan si aad wax uga beddeli karto shaqadaada farshaxanka ah.
Fiidiyowga la wadaago waxaad ku arki kartaa si dhammaystiran waa sidee sawir gacmeedka derbi aan jirin iyo buufisyo taxane ah oo midabbo kala duwan leh oo u oggolaanaya nooc sax ah si shaqooyin xiiso leh loo abuuri karo.
Waan ka fog nahay saxsanaanta shaqada fanka sida kuwa aan ka arki karno farshaxanno kala duwan, laakiin waa tallaabada ugu horreysa ee loo maro inaad maalin uun gasho Matxaf dalxiis ah oo farshaxan-yahanno la wadaag shaqadooda oo xitaa waad rinji kartaa taada.
Haddii aad nasiib u yeelatay inaad isku daydo waxa dhabta ah ee dhabta ah, waad fahmi kartaa taas dareenku waa mid dhab ah, ugu yaraan midka aan ku dareemay HTC Vive. Waa waayo-aragnimo illaa laga tijaabiyo, runti ma fahmi kartid baaxaddeeda, maadaama ay horumartay
Korsashada HTC waxay noo ogolaaneysaa inaan si buuxda isugu quusinno adduunyo gebi ahaanba ka baxsan kuweenna.
Goor dhow xitaa waan awoodi doonnaa inaan xirno muraayadaha indhaha oo aan kaga soo qayb galno taxane taxane ah oo marka aan iska siibno, baabi'in doonaa araggayaga ka hor inaad uga tagto meel bannaan oo iyaga ka mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Rinjiyeynta sawir gacmeedka iyada oo loo marayo xaqiiqda dhabta ah
Mawduucyada, mid ka mid ah sababaha ay tahay inaad u adeegsato Wordpress boggaaga ama bartaada internetka